နိုငျငံ့မိခငျ အမဒေေါျအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ၇၆ နှစျပွညျ့ မှေးနေ့အား ကွိုဆိုပါ၏ – Shwe Nay Chi
အမေ လို့ ခေါ်နေကြတဲ့သူစိမ်းအမျိုးသမီးကြီးအကြောင်း၁၉ . ၆ . ၁၉၄၅ မနက်သုံးနာရီ သုံးဆယ့်ငါးမိနစ်မှာစတင်လင်းလက်ခဲ့တဲ့ကြယ်
ကျွန်တော်တို့ကို ခဏခဏကြွေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကြယ် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၂၆ရက်တွေ့လား။
ရွှေတိဂုံဘုရားအနောက်ဘက်မုခ်မှာမြင်လား အဲ့ဒီကလေးမဒါ .. နိဒါန်းပဲ ၊ အဖေ့တာဝန်ကိုဆက်ခံပြီအာရှသူရဲကောင်းသီချင်းကိုအော်ဆိုရင်းဒီအမျိုးသမီးကို သူရဲကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးမှာ ဆုတောင်းစရာမလိုခဲ့ဘူး။
စက်တင်ဘာ ( ၂၇ ) ၁၉၈၈ဒီအရှုပ်တွေဇာတ်သိမ်းဖို့ ဒီချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီဒီအတွင်းရေးမှူးမက အိပ်မက်ဆိုးတွေကိုလှုပ်နှိုးပေးလိမ့်မယ် မောင်းတင်စရာမလိုပဲပြည်သူ့နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားလိမ့်မယ်ဂရုစိုက်ကြ စောင့်ရှောက်ကြ။
ဒီကလေးမက သူ့အဖေလိုပဲတစ်ခါတစ်လေ ခေါင်းအရမ်းမာတယ်၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ ( ၂၀ )တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကိုဖြတ်တိုင်းသူ့ကိုအားနာတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ဖို့ သူ အတုပ်အနှောင်ခံထားရတယ် အဲ့ဒီကာလတွေဟာ
ကျွန်တော်တို့အတွက်နှလုံးသွေးတွေရပ်တန့်သွားသလိုမျှော်လင့်ချက်တွေသေသွားသလိုတိတ်တိတ်လေးဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်ကောင်းကင်မှာဝဲပျံနေတဲ့ ငှက်တွေကိုကြည့်ရင်း၁၉၉၁ အောက်တိုဘာ ( ၁၄ )ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဂုဏ်ယူတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက်သူကပြယုဂ်ကြီးပါ။
မှေးမှိန်အောင်လုပ်ထားပေမယ့်လင်းလက်နေဆဲပဲဆိုတာသိလိုက်ရတော့သေနတ်တွေတောင် ခေတ္တခဏ ကျည်အ သွားခဲ့ရတယ် ၃၀ . ၅ . ၂၀၀၃
မမေ့ဘူး မေ့လို့မရဘူးသွေးပျက်စရာကောင်းပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးက ပန်းပန်မပျက်ခဲ့ဘူးထိုးချိန်ခံထားရတဲ့ပြောင်းဝတွေရှေ့မှာဧကရီထိပ်ထားက တစ်ချက်မမှားခဲ့ဘူး။
ဒီပဲယင်းရေ မင်းမြေကိုနင်းလိုက်တိုင်းဒီအာဂအမျိုးသမီးကို အကြိမ်ကြိမ်ဦးညွတ်မိတယ်ဟုတ်တယ် ခင်ဗျားထင်လားပန်းသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဒီမိန်းကလေးဒီလောက်မာကျောမယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လားလာလေ..တိုက်ကြ တိုက်ကြဟေ့ .. စကင်ဒီနေဗီးယန်းကကျောက်ဆောင်ကွ။
ကျွန်မက အရိုင်းသမီးပါဆိုပြီးဝံပုလွေတွေကြားထဲ ကျားရဲတစ်ကောင်လိုရှင်သန်နေတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်မက မိသားစုအပေါ်မှာတာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုပြီး
တော်လှန်ရေးအတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်မက သူတို့အတွက်အမေပါဆိုပြီးအဆိပ်တွေကိုမျိုချ ပျားရည်တွေကိုအန်ထုတ်နှလုံးသွေးတွေနဲ့ လမ်းခင်းပေးတဲ့အမျိုးသမီးလှုပ်နှိုးပြီးပြလိုက်ချင်တယ်။
ထကြည့်ပါဦးဗျ ကိုအောင်ဆန်းခင်ဗျားသမီးလေးစုကို ခေါ်နေကြတယ် အမေ တဲ့။
နိုင်ငံ့မိခင် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အား ကြိုဆိုပါ၏။
အမေ လို့ ခေါျနကွေတဲ့သူစိမျးအမြိုးသမီးကွီးအကွောငျး၁၉ . ၆ . ၁၉၄၅ မနကျသုံးနာရီ သုံးဆယျ့ငါးမိနစျမှာစတငျလငျးလကျခဲ့တဲ့ကွယျ
ကြှနျတောျတို့ကို ခဏခဏကွှအေောငျလုပျခဲ့တဲ့ ကွယျ ၁၉၈၈ ခုနှစျ ၊ သွဂုတျလ ၂၆ရကျတှေ့လား။
ရှှတေိဂုံဘုရားအနောကျဘကျမုချမှာမွငျလား အဲ့ဒီကလေးမဒါ .. နိဒါနျးပဲ ၊ အဖေ့တာဝနျကိုဆကျခံပွီအာရှသူရဲကောငျးသီခငြျးကိုအောျဆိုရငျးဒီအမြိုးသမီးကို သူရဲကောငျးဖွစျပါစလေို့ရှှတေိဂုံဘုရားကွီးမှာ ဆုတောငျးစရာမလိုခဲ့ဘူး။
စကျတငျဘာ ( ၂၇ ) ၁၉၈၈ဒီအရှုပျတှဇောတျသိမျးဖို့ ဒီခြုပျကိုဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီဒီအတှငျးရေးမှူးမက အိပျမကျဆိုးတှကေိုလှုပျနှိုးပေးလိမျ့မယျ မောငျးတငျစရာမလိုပဲပွညျသူ့နှလုံးသားကို သိမျးပိုကျသှားလိမျ့မယျဂရုစိုကျကွ စောငျ့ရှောကျကွ။
ဒီကလေးမက သူ့အဖလေိုပဲတစျခါတစျလေ ခေါငျးအရမျးမာတယျ၁၉၈၉ ဇူလိုငျလ ( ၂၀ )တက်ကသိုလျရိပျသာလမျးကိုဖွတျတိုငျးသူ့ကိုအားနာတယျကြှနျတောျတို့လှတျလပျဖို့ သူ အတုပျအနှောငျခံထားရတယျ အဲ့ဒီကာလတှဟော
ကြှနျတောျတို့အတှကျနှလုံးသှေးတှရေပျတနျ့သှားသလိုမြှောျလငျ့ခကြျတှသေသှေားသလိုတိတျတိတျလေးဝမျးနညျးခဲ့ရတယျကောငျးကငျမှာဝဲပြံနတေဲ့ ငှကျတှကေိုကွညျ့ရငျး၁၉၉၁ အောကျတိုဘာ ( ၁၄ )ကြေးဇူးတငျပါတယျဗြာဂုဏျယူတယျဒီမိုကရစေီနဲ့လူ့အခှငျ့အရေးအတှကျသူကပွယုဂျကွီးပါ။
မှေးမှိနျအောငျလုပျထားပမေယျ့လငျးလကျနဆေဲပဲဆိုတာသိလိုကျရတော့သနေတျတှတေောငျ ခတေ်တခဏ ကညြျအ သှားခဲ့ရတယျ ၃၀ . ၅ . ၂၀၀၃
မမေ့ဘူး မေ့လို့မရဘူးသှေးပကြျစရာကောငျးပမေယျ့ဒီအမြိုးသမီးက ပနျးပနျမပကြျခဲ့ဘူးထိုးခြိနျခံထားရတဲ့ပွောငျးဝတှရှေေ့မှာဧကရီထိပျထားက တစျခကြျမမှားခဲ့ဘူး။
ဒီပဲယငျးရေ မငျးမွကေိုနငျးလိုကျတိုငျးဒီအာဂအမြိုးသမီးကို အကွိမျကွိမျဦးညှတျမိတယျဟုတျတယျ ခငျဗြားထငျလားပနျးသိပျကွိုကျတဲ့ ဒီမိနျးကလေးဒီလောကျမာကြောမယျလို့ ခငျဗြားထငျလားလာလေ..တိုကျကွ တိုကျကွဟေ့ .. စကငျဒီနဗေီးယနျးကကြောကျဆောငျကှ။
ကြှနျမက အရိုငျးသမီးပါဆိုပွီးဝံပုလှတှေကွေားထဲ ကြားရဲတစျကောငျလိုရှငျသနျနတေဲ့အမြိုးသမီးကြှနျမက မိသားစုအပေါျမှာတာဝနျမကြခေဲ့ဘူးဆိုပွီး
တောျလှနျရေးအတှကျ အသငျ့ရှိနတေဲ့အမြိုးသမီးကြှနျမက သူတို့အတှကျအမပေါဆိုပွီးအဆိပျတှကေိုမြိုခြ ပြားရညျတှကေိုအနျထုတျနှလုံးသှေးတှနေဲ့ လမျးခငျးပေးတဲ့အမြိုးသမီးလှုပျနှိုးပွီးပွလိုကျခငြျတယျ။
ထကွညျ့ပါဦးဗြ ကိုအောငျဆနျးခငျဗြားသမီးလေးစုကို ခေါျနကွေတယျ အမေ တဲ့။
နိုငျငံ့မိခငျ အမဒေေါျအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ၇၆ နှစျပွညျ့ မှေးနေ့အား ကွိုဆိုပါ၏။
ယေန႔အထိ ရြာမွာအလွဴရွိပီဆိ္ုတာနဲ႕ တစ္အိမ္ကိုတစ္အိုး ထမင္းအၿမဲေပါင္းေပးေနတဲ့ ညီၫြတ္တဲ့႐ြာေလး